December « 2021 « Online Tv Nepal
पूर्वयुवराज पारसको ५०औं जन्मदिनमा २६ लाखको पार्टी
हिजो पूर्वयुवराज पारस शाहको जन्मदिन । उनी हिजो ५० वर्ष पुगे । यसपटक पारसको जन्मदिन पूर्व राजपरिवारले तामझामका साथ मनाए । होटल सोल्टीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्य जन्मदिन मनाउन पुगेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी, पारसका सन्तान, बहिनीहरुका अलावा राजपरिवारका नातेदारको ठूलै जमघट भएको थियो । २ सय
डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहासहित १३ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार आन्दोलनको तेस्रो दिन पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्न खोज्दा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा जनमतका उपाध्यक्ष कुशवाहासहित ९ जना र कपिलवस्तुबाट ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । किसान आन्दोलनको क्रममा राजमार्ग बन्द गराउने क्रममा
यो संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको तस्बिर हो । तस्बिरमा शान्ति मिसनमा खटिएका तीनजना महिला सैनिकको तस्बिर छ । तस्बिर दक्षिणी सुडानको जुबास्थित यूएन शिविरको हो । जहाँ मलावीकी कप्तान अटुपेली मेवे, भारतकी मेजर बिन्देश्वरी र नेपालकी कप्तान रितु पाण्डे छिन् । तीनैजनाको पोशाक फरक छ । टोपीमात्र उस्तै । शान्ति
जाडोमा जाँड रक्सी खाँदा होसियार: जाडो भगाउन जाँड रक्सी खाँदा हृदयघातको जोखिम, जान सक्छ ज्यान
काठमाण्डाै – चिसो समयमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले विशेष ख्याल गर्न डाक्टरको सुझाव छ । चिसोमा दम, मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी समस्या भएका दीर्घ रोगीलाई जोखिम धेरै हुने भएकाले उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन डाक्टरले सुझाव दिएका हुन् । चिसोको समयमा तातो न्यानो हुन हिटर तथा कोइला बाल्नुको
बिजुली गइरहने समस्या समाधान हुन्छ : कुलमान
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली गइरहने समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्नु परेकाले बेलाबेला विद्युत जाने गरेको उनले बताए । शुक्रबार प्रधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विगत ३/४ दिनदेखि विद्युत आपूर्तिमा केही समस्याहरु देखियो भन्ने जनगुनासोहरु
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने अवसर गुम्न नदिने बताएका छन् । कतिपयले प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला ? चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला भनेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘जरुरी पर्दा मलाई गाउँघरमा जान, उनीहरुसँगै बस्न, मजदूरसँग खान, जनतामाझ गएर बस्न कुनै गाह्रो छैन ।’ प्रज्ञा भवनमा जारी
अज्ञात समूह द्वारा हनुमानढोका क्षेत्रभित्रको मल्लकालीन शिलालेख तोडफोड
अज्ञात समूहले हनुमानढोका क्षेत्रभित्र राखिएको मल्लकालीन शिलालेख तोडफोड गरेको छ । बिहीबार कृष्ण मन्दिर बाहिर राखिएको प्रताप मल्लकालीन शिलालेख तोडफोड भएको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अभिलेख राजा प्रताप मल्लको समय अर्थात् वि.सं. १७०५ मा राखिएको हो । अभिलेख तोडफोड भएको जानकारी
बेमौसमी वर्षाका कारण इँटा उद्योगमा क्षति
दुईदिन अघिसम्म परेको बेमौसमी वर्षाका कारण रौतहटका इँटा उद्योगमा करोडौं मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । वर्षाले काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको हो । मंगलबार रातिदेखि बुधबारसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले रौतहटका एक सयभन्दा बढी इँटा उद्योगमा पोल्नका लागि राखिएको करोडौं मूल्य बराबरको काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको हो । इँटा
एकताको प्रस्ताव बोकेर रवीन्द्र मिश्र भेट्न पुगे राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री धवलशमशेर राणा र विकेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रबीच पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको छ। शुक्रबार मिश्रको निवास पुगेका लिङ्देन र राणाले मिश्रसँग पार्टी एकताबारे कुराकानी गरेका हुन्।‘हामीबीच समान विचार छ, पार्टी एकताका विषयमा कुराकानी भएको छ,’ राप्रपा महामन्त्री राणाले भने। समान विचार भएका पार्टीहरूबीच
शुक्रबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। छापावाल सुको मूल्य तोलमा ६ सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलमा १५ रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले आजका लागि छापावाल सुनको मूल्य ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बिहीबार छापावल सुनको